Safaarad Dadkeedii Gadatay! Xogta KM | KEYDMEDIA ONLINE
Safaarad Dadkeedii Gadatay! Xogta KM
Keydmedia Investigate - Waa arrin la yaab leh oo cid waliba ka fajicisay. Ereyada la yiraahdo Amakaag/Shqaraar way kasii xanuun badan yihiin Ereyga kale ee la yiraahdo la yaab/fajac, tanoo kalena weli Keydmedia.net masoo marin. Waxaa la dhihi karaa waa Dhacdo-Taariikheed ah oo aan hore usoo marin Bulshada Caalamka. Bal waa tane nala Qaybsada!!!
Xog lagu kalsoon yahay baa naga soo gaartay in Xabsiga ku yaal Magaalo-Madaxda Dalka Tanzania ee Daru Salam ay ku xiran yihiin Tahriibeyaal Soomaaliyeed oo Tiradoodu gaarayso inta u dhexaysa 800-1000, da'dooduna u dhexayso 15-40 Sano, hase yeeshee dhallinyaro u badan oo leh rag iyo Dumarba oo Tahriib u aaday Dalka South Africa Bishii Febraayo, 2011.
Markii Keydmedia ay arrintaas dabagal ku samaysay waxay la kulantay Maxbuus kamid ah dadka Tanzania ku xirnaa 10 Bilood oo markuu bixiyey Madaxfurasho dhan ilaa $800 oo Dollar lasii daayey, waxaana Magaciisa la yiraahdaa Cabduraxmaan ... (Magacaga waa soo koobnay, Aminiga owgeed) oo hadda jooga Nairobi, Kenya.
Cabduraxmaan ayaa la xiriiray Xafiiska Keydmedia ee Magaalada Nairobi, sidatan ayuunah u tilmaaman uga bixiyey Xaaladda Maxaabiista weli la haysto iyo wixii uu naftiisa isaga iyo inta kaleba soo mareen intii uu xirnaa, ama Xabsiga loo soo wadey, waana sidatan:
Tirada Xabsiga ku jirta waxay qiyaastu u dhexesay 800-1000 Qof markii xabbiska la i keenay. Tirada Maxaabiistu joogtu way is dhintaa oo mar walba wax baa ka dhinta (ilaa hadda 6 Maxbuus baa ka geeriyootay), qaar kalena madaxfurasho ayay xabiska uga baxaan ciddii bixisa madaxfurasho u dhexaysa $ 800-1,000 oo ah doolarka Maraykanka hadba inta ay tahay Awoodda dhaqaale ee Maxbuuska.
Ugu horrayntii dadkaasu waxay xabsiga kusoo bilaameen horraantii bishii Janaayo, 2011, waxaana laga soo qabqabtay xudduda u dhexeeya Tanzania iyo Mozambique iyo Mozambique iyo South Africa, dhammaantoodna waxaa loo soo gudbiyaa Xabsiga Dar El Salam, halkaasoo ilaa Maanta intoodii badayd ku sugan tahay.
Xabsigu waa Saylad Madax-bannaan oo dadka looga Ganacsado. Jimcihii bishii la soo dhaafay waxaa is-Madaxfuratay 49 Maxbuus oo 2 Dumar tahay, waxayna bixiyeen Lacag u dhexaysa $800-1000. (Warkooda iyo telefoonnadooda waanu idiin soo gudbin doonaa markaanu cid kala la kulano.)
2 Gabdhood baa xabsiga weli ku dambeeyaan, intooda kelana waa rag. Maxaabiistaanu waxay ka kooban yihiin dhammaan beelaha Soomaaliyeed oo dhan, intooda badanna waxay ka yimaadeen Muqdisho, waxayna usoo qaxeen inay helaan Nolol iyo Nabad dhaanta tan ay kasoo carareen.
Cabduraxmaan oo ku Hadla Afka Sawaaxiliga xog badan buu ka og yahay Xaaladda nololeed ee Maxaabiistu ku sugan tahay oo isaga ayaana u kala turjumi jirey Askarta iyo Maxaabiista.
C/maan wuxuu kaloo indhisiisa kusoo arkay tuulooyin u dhexeeya Tanzania iyo Mozambique oo 7 Gabdhood oo Soomaali ah oo addimada uga xiran rag Cawaandi ah oo daggan xadka u dhexeeya Mozambique iyo Tanzania.
Waa Gabdho Qurux badan ayuu yiri oo mid walba silsilad ayay tii-dhexaadka Guriga qoobka uga xiran tahay oo halkaas lagu haysto, rajo yarna laga qabi karin in lasoo samatabiixiyo inta TFG-du Dalka ka taliso.
Xaaladda Nolosha ee Maxaabiista
Xaaladda ay Maxaabiistu ku jirto waa mid u dhiganta tii Naasiga (Holoucast in Germany), waana sidatan: Aad bay u aradan yahay, siiba Dumarka.
Baahidu waa joogto oo mar qurah baa maalintii la siiyaa caag yar oo Ugaali ah (soor galley ah), waxaana loogu iidaamaa biyo digireed. Ciddii Dalka Sharcidarro kusoo gasha (sida Maxaabiistan oo kale), waxaa lagu ciqaabaa in ugaaliga loogu qoosho cusbo badan oo Qofka shuban ku ridda, ilaa haddna 5 Maxbuus ah baa cusbadii ay shuban ku ridday oo u Geeriyooday.
Darxumada awgeed, waallida Maxaabiista waa la qiyaasi karaa oo Qof walba si bay u saamaysay, waase la kala daran yahay, waxaana ilaa hadda dharkii tuuray 6 Maxbuus oo xabsiga ku walatay oo iyaga oo Qaawan ku dhex nool Maxaabiista intooda kale.
Maxabuuskii gunuunuca ama Maanka laga galo oo qayliya muddo toddobaad ah baa lagu xiraa Qol Biyo dhexfadhiyaan oo kuwo qabowna kor kasoo daadanayaan. Qofka Qolka caddibaadda gala mar walba jirkiisa iyo calaladda uu qabo waa qoyan yihiin, taasoo sababta in korka Qofka diirku ka dhaco, ciddiyuhuna ay ka daataan.
Kufsiga, jirdilka iyo darxumaynta guud ee Maxaabiista soo gaarta oo ay ku sameeyaan ilaalada xabsiga waa iska joogto, siiba xagga Dumarka, mana helaan miciin u gargaara oo dhibka ka yareeya. Gogol iyo wax la huwado toona ma haystaan kaneecadana lama buufiyo oo cadho ayay maxaabiistii ku ridday.
Waxaa Nasiibdarro ah inaan Hay'adaha Caalamiga ee Xuquuqda Aadamiga ilaaliya ayna arrinta u codyayn oo weli ina soo booqan xaaladda ba'an ee haysata Maxaabiista halkaas ku go'doonsan, UN-kuna iskuma shiddayn inay dadkaas jirraban u miciinaan oo wax u qabtaan.
Cabduraxmaan wuxuu xabsiga ku jirey muddo 10 Bilood ah wuxuuna kasoo baxay 11kii bishii Febraayo, 2012 markuu biixiyey $ 800 oo ah doolarka Maraykanka, wuxuuna gacanta u geliyey Nin la yiraahdo Maxamad Diiriye oo ka tirsan Safaaradda Soomaliya ee Tanzania fadhida.
Weli ma hayno in Maxamad Diiriye uu Arrintan keligiis ku yahay iyo cidda Madaxfurashada la qaybsata; waxaase xaqiiqo ah in daalimkaas la weheliyo. Ma Safiirkaa...! Ma Wasiirka Ariimaha Dibaddaa...! Ma Wasiirka 1aad baa...! Ma Madaxweynaha...! Intaba far baa ku godan, ummadduna way arki doontaa.
TFG-du xaaladda Maxaabiista aad bay uga Qarqabtaa oo muudo 10 bilood ah baa arrintu soo jiitameysey. Qarsoodi ma ahan in Safaaraddu Maxaabiista ka Ganacsato oo Madaxfurasho ka qaadato, maxbuuskii kaalmo dhaqaale heli karana waa inuu bixiyo lacag dhan ilaa $ 800-1,000, hadba inta ay tahay awoodda jeebkiisa ee Maxbuusku bixin karo.
Lacag qaadidda waxaa u xilsaaran ninka kor ku xusan oo ka tirsan Shaqaalaha Safaaradda, waxayna nala tahay in Safiirku Gacan weyn ku leeyahay ka Ganacsiga Maxaabiista. Sidoo kale, in kastoo aad looga warqabo arrinta Maxaabiista waxaa wax ka qabadkeeda ka gaabsaday: Wasiirka Arrimaha Dibadda ee TFG-da, Wasiirka 1aad iyo Madaxweynaha, kuwaasoo la filayo inay dhakhliga madaxfurashada ka qayb-qaataan
Booqashadii Madaxweyne Shariif Axmad ee Dalka Tanxania
Bishii Agoosto dhexdeedii (Soonqaadkii tagey dhexdiisii) ayaa Madaxweyne Shariif Axmad iyo Meles Zanawi booqasho ku gaareen Dalka Tanzania, nin walbana dan gaar ah ayuu watey. Markay la kulmeen Madaxweynihii dalkaas oo la dooransiiyey Nin walba waxa gaar u rabo, Meles wuxuu codsaday in Maxaabiista Itoobianka ah oo Tanzania ku xiran dib loogu celiyo Itoobiya oo xuduudka la geeyo celiyo.
Isla maalintiin 2aad baa dib loo raray maxaabiistii Xabashida waxaana lagu daadgureeyey baabuur milatary oo Tanzaniya leedahay oo geysey xuduudka Itoobiya maalintii 3aad, halkaas oo gaadiid milatary oo Itoobiaan ahi kasii qaadeen oo dalkoodii ku celiyeen. Maxbaabiistii Xabashiyeed dalkoodibay gaareen maalintii 3aad kadib markii Meles Zenawi uu Tanzania oo gaaray.
Shariif Axmad marka la doorsiiyey wuxuu rabo wuxuu sheegtay in la siiyo galley macaawino ah, waxaana loo raray 170 metric ton oo Galley ah, maxaabiistiina halkaas ayuu uga dhaqaaqay. Bal is barbardhig waddaninimada Meles Zenawi iyo tan Shariif Axmad...!
Nasiibdarro, Wasiirkii Arrimaha Dibadda ama Wasiirka 1aad dabagal kuma samayn arrinta maxaabiista oo halkaas bay uga gaabsadeen. Waxaase lama filaan ah in Madaxda sidaas u dhaqanta ay u malabsanayaan mar labaad inay dalka madax ka noqdaan, Mahiigana uu halkaas ku ilaaliyo...!
Intii nolo ku dambaysa, maxaabiistanu sidee bay u arki doonaa maxada TFG-da oo maanta dalka ka talisa? Ma lagu yaabi doonaa haddii haraadiga maxaabiistanu ay safka hore lasoo galaan al-Shabaab mar haddii madaxdii dawladdoodu inkirtay jiritaankooda iyo jinsiyaddooda?
Qormadu waa socotaa.....
Keydmedia.net - Editorial Desk - Nairobi